ချစ်သူဆီက လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာခံလိုက်ရတဲ့ အိမ့်ချစ်
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့မှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာပါ။
အိမ့်ချစ်ကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့မှာ ချစ်သူရဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာကို ခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မထင်မှတ်ထားခဲ့တာကြောင့်လည်း အရမ်းပျော်ခဲ့ရတယ်လို့ ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်။
Photo: Eaint Chit
အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြောလေ့မရှိတဲ့ အဆိုတော် အိမ့်ချစ်ကတော့ သူ့ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ထုတ်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့မှာ အိမ့်ချစ်ရဲ့ ချစ်သူက သူမကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
"မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ Propose လုပ်တဲ့သူ။ အချစ်တွေပေးတဲ့သူ၊ အေးချမ်းတဲ့မေတ္တာတွေပေးသူ၊
လုံခြုံနွေးထွေးမှုတွေပေးသူ၊ အဖေလိုအစ်ကိုလိုစောင့်ရှောက်ပေးသူ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုပျော်ရွှင်မှုတွေပေးသူ၊ သူနဲ့တူတူဘဝတစ်ခုထူထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမို့... I said YES..!!!" ဆိုပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီအချိန်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အိမ့်ချစ်ကတော့ ချစ်သူ ဆီက လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံရမယ်ဆိုတာ တကယ်ကို မသိခဲ့တာပါတဲ့။ Surprise ဖြစ်ရတဲ့အတွက် အပျော်တွေ လွန်နေမိပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ချစ်သူကတော့ အိမ့်ချစ်ထက် အသက် ၃ နှစ်ပိုကြီးပါတယ်တဲ့။
"Eiffel Tower ရှေ့ရောက်တော့ Junior လေးကို ငါ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဆိုပြီး ရိုက်ခိုင်းပြီး နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူက လက်စွပ်ဘူးလေးဖွင့်ပြီး Propose လုပ်တော့တာပဲ အဲ့အချိန်မှာထင်မှတ်မထားတော့ရယ် ရမလို၊ ငိုရမလို၊ ခုန်ရမလို၊ ထိုင်ရမလို၊ ထရမလိုနဲ့ဘာပြောရမလဲမသိ စကားတွေအများကြီးပြောနေမိပြီးအပျော်တွေလွန်နေတာ။ Video လေးက junior လေးခိုးရိုက်ထားတာလေးတွေဘဝရဲ့အမှတ်တရအချိန်လေးတစ်ခုပါပဲ။ ဒါနဲ့ ရုပ်တူတယ်ပြောကြသလို မြန်မာလား ငယ်လားမေးကြလို့ရုပ်ကတော့ ဘာလို့လာတူလဲမသိပါဘူးလေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိူးစစ်စစ်ပါလို့ ပြီးတော့သူက ၃နှစ် ကြီးတာပါလို့" ဆိုပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ မနက် ၄ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာပါ။
အိမ့်ချစ်ဟာ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပီပီ အလေးအနက်ထားတတ်သူ တစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့ နှလုံးသားရေးရာမှာလည်း အမှားဖြစ်စေမယ့် အရာမျိုး မလုပ်ဘူးလိုလည်း မီဒီယာ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
“ ဒါကျွန်မ ရည်းစား၊ ချစ်သူပါ ပြောပြီး တော်ကြာ ပြတ်သွားပြီဆိုတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူး။ မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုမဖြစ်ချင်ရင် အစကတည်းက မကြိုက်နဲ့လို့ ပြောမှာပေါ့။ မကြိုက်ပဲလည်း မနေနိုင်ဘူးလေ ကိုယ်က ခေတ်လူငယ်ဆိုတော့ ရည်းစားကတော့ တွေ့နေမှာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကျန်နေရစ်ခဲ့မယ့်ဟာမျိုး အိမ့်ချစ် မလုပ်ချင်ဘူး” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
အိမ့်ချစ်(Eint Chit) ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂီတနဲ့မစိမ်းသလို ဖခင် ဦးချစ်ကောင်းနဲ့အတူ စတိတ်စင်ပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေလာသူတစ်ဦးပါ။ အိမ့်ချစ်ဟာ အတွဲခွေများစွာမှာ ပါဝင်သီဆိုဖူးခဲ့သလို "ကိုယ်တိုင်ရေး ပုံတူပန်းချီ" ၊ အချစ်ရေးစတဲ့ တေးသီချင်း ခွေများနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးချစ်ကောင်းနဲ့အတူ "၅၂၈" ဖျော်ဖြေ ပွဲကြီးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ အတွင်းကလည်း သူမရဲ့ဖခင် ဦးချစ်ကောင်းရယ်၊ မောင်လေးဖြစ်တဲ့ ဂျူနီယာချစ်ကောင်းရယ် သုံးယောက်ပေါင်းပြီး FG live Lounge.. ပွဲ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။